လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ကို ဘယ်လို ထိန်းရမလဲ?? – Gentleman Magazine
လိင်မှုဘဝ လိုအပ်ချက်ဟာ လူသားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ အခုခေတ် ယှဉ်ပြိုင်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘဝနေမှုပုံစံကြောင့် ကိုယ်ပိုင် ကိစ္စတွေအတွက် အချိန်မရတော့ပါဘူး။ အဲဒိလိုအခြေအနေမှာ သင့်ရဲ့ ရုန်းကြွနေတဲ့ စိတ်ကို ထိန်းရတာ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးက ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုနာကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။
သင့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းကတော့ ခုလို လိုအပ်ခံစားနေတာ ရှက်စရာမဟုတ်ဖူးဆိုတာ လက်ခံပေးဖို့ပါပဲ။ လူမှူ အသိုင်းအဝိုင်းက ဒီလို ခံစားရမှုကို မကောင်းတဲ့ ခံစားမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဲဒိ ခံစားချက်တွေကို ဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လက်ခံထားမယ့်အစား သိုဝှက်ထားဖို့ အားပေးတတ်ကြပါတယ်။
ဘာသာတရားတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံတာကို အပြစ်တစ်ခုလို ဖော်ပြကြပြီး ဆက်ဆံလိုစိတ်ကိုတော့ မကောင်းဆိုးရွားနဲ့ ပုံနှိုင်းကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီစိတ်တွေဟာ ဘဝလိုအပ်ချက်တွေပါ။ လူသားတွေ လိင်ကိစ္စအကြောင်း စဉ်းစားတာကို ထိန်းလို့မရပါဘူး။ ဒီခံစားမှုကို လက်ခံထားပြီး ထိန်းသိုထားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထိန်းထားနိုင်မှာပါ။
ပုံမှန် လိင်ဆက်ဆံသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း ငါးခု
၂. လှုံ့ဆွပေးသော အရာများ
သင့်ရဲ့ လိင်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဒုတိယခြေလှမ်းကတော့ အဲဒီစိတ်တွေ ဘယ်လို စဖြစ်လာလဲဆိုတာ သိဖို့ပါ။ လူသားတွေဟာ လိင်စိတ်ကြွစေတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဝန်းရံထားခံရပြီး နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလိုကို ဖြစ်နေတာပါ။ လိင်ကိစ္စကို စိတ်မရောက်သေးတဲ့ လူအဖို့မှာတော့ အဲဒိအရာတွေဟာ သူ့ဘာသာ ကျော်ဖြတ်သွားကြပြီး လိင်စိတ်ကြွနေသူအဖို့ကတော့ မြင်မြင်ကရာက အနှောင့်အယှက်ပေးနေပါတယ်။ အဲဒိ အရာတွေကို သိထားခြင်းဟာ ဦးနှောက်ထဲက အဲဒိအရာတွေကို ရှင်းထုတ်ဖို့ အကူအညီပေးပါတယ်။
လုံလောက်တဲ့ စိတ်ခွန်အားရှိရင် တောင်တစ်လုံးကိုတောင် ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ လိင်စိတ်ကို ထိန်းတာလောက်ကတော့ အပျော့ပေါ့။ လိင်စိတ်အတွေးတွေကို လုံးဝ အမြစ်ဖြတ်လို့ မရပေမယ့် နေ့စဉ်ဘဝကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေထိ နည်းသွားအောင်တော့ လျှော့ချပစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခွန်အားတိုးစေတဲ့ စာတစ်ခုဟာ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို အနှောက်အယှက် ကင်းကင်း ကျော်ဖြတ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ တက်ကြွနေတဲ့ လိင်စိတ်ကို တခြားနေရာတစ်ခုခုကို ပြောင်းလွှဲပစ်လိုက်ခြင်းဟာ သင့်စိတ်ကို ရှင်းလင်းသွားစေရုံသာမက အသစ်တစ်ခုခုကိုပါ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ နေ့တစ်နေ့ကုန်ဆုံးချိန်မှာ စိတ်ဆန္ဒဆိုတာ လိုအပ်တာမရလို့ ရုန်းကြွလာတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒါကို တခြား နေရာကို အာရုံလွှဲပေးပါ။ စာဖတ်ပါ။ ကဗျာရေးပါ။ ပန်းချီဆွဲပါ။
ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
သင့်စွမ်းအင်တွေကို တခြားနေရာတစ်ခုခုမှာ ကုန်ဆုံးပစ်လိုက်တာပါ။ သင့်ကိုလဲ နေရထိုင်ရ ကောင်းစေပါတယ်။ စောစောထ၊ မနက်ခင်း ပြေးပါ။ တစ်ပါတ် သုံးကြိမ် ရေကူးဖို့ အကျင့်လုပ်ထားပါ။ အလုပ်မလုပ်ခင် မနက်တိုင်းလဲ Gym သွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့် စိတ်ကိုလဲ ပိုပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာကမှ သင့်စိတ်ကို လိင်ကိစ္စကနေ အာရုံလွှဲမရဘူးဆိုရင် ပြသနာ ရှိပါတယ်။ သင်က Relationship နဲ့ဆိုရင် သင့်ပါတနာကို သင် လိုအပ်နေကြောင်း ပြောပြပါ။ အချိန်မှန်မှန် လိင်ဆက်ဆံရင်တော့ ဒီပြသနာတွေ လျော့ပါးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ မရသေးရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်၊ စိတ်ပညာရှင်တို့နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။ ဆေးဝါးနဲ့ ကုထုံးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
လိငျဆကျဆံလိုစိတျကို ဘယျလို ထိနျးရမလဲ??
လိငျမှုဘဝ လိုအပျခကျြဟာ လူသားတှရေဲ့ အခွခေံလိုအပျခကျြတဈခုပါ။ အခုခတျေ ယှဉျပွိုငျလှုပျရှားနရေတဲ့ ဘဝနမှေုပုံစံကွောငျ့ ကိုယျပိုငျ ကိစ်စတှအေတှကျ အခြိနျမရတော့ပါဘူး။ အဲဒိလိုအခွအေနမှော သငျ့ရဲ့ ရုနျးကွှနတေဲ့ စိတျကို ထိနျးရတာ ခကျခဲပါလိမျ့မယျ။ အောကျဖျောပွပါ ဆောငျးပါးက ဘယျလို ထိနျးခြုပျရမလဲဆိုနာကို ဖျောပွပေးမှာပါ။
သငျ့ရဲ့ လိငျဆကျဆံလိုစိတျကို ထိနျးခြုပျဖို့ ပထမခွလှေမျးကတော့ ခုလို လိုအပျခံစားနတော ရှကျစရာမဟုတျဖူးဆိုတာ လကျခံပေးဖို့ပါပဲ။ လူမှူ အသိုငျးအဝိုငျးက ဒီလို ခံစားရမှုကို မကောငျးတဲ့ ခံစားမှုအဖွဈ သတျမှတျကွပွီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အဲဒိ ခံစားခကျြတှကေို ဘဝရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ လကျခံထားမယျ့အစား သိုဝှကျထားဖို့ အားပေးတတျကွပါတယျ။
ဘာသာတရားတှဟော လိငျဆကျဆံတာကို အပွဈတဈခုလို ဖျောပွကွပွီး ဆကျဆံလိုစိတျကိုတော့ မကောငျးဆိုးရှားနဲ့ ပုံနှိုငျးကွပါတယျ။ တကယျတော့ ဒီစိတျတှဟော ဘဝလိုအပျခကျြတှပေါ။ လူသားတှေ လိငျကိစ်စအကွောငျး စဉျးစားတာကို ထိနျးလို့မရပါဘူး။ ဒီခံစားမှုကို လကျခံထားပွီး ထိနျးသိုထားခွငျးဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ထိနျးထားနိုငျမှာပါ။
ပုံမှနျ လိငျဆကျဆံသငျ့တဲ့အကွောငျးရငျး ငါးခု
၂. လှုံ့ဆှပေးသော အရာမြား
သငျ့ရဲ့ လိငျခံစားမှုကို ထိနျးခြုပျဖို့ ဒုတိယခွလှေမျးကတော့ အဲဒီစိတျတှေ ဘယျလို စဖွဈလာလဲဆိုတာ သိဖို့ပါ။ လူသားတှဟော လိငျစိတျကွှစတေဲ့ အရာတှနေဲ့ ဝနျးရံထားခံရပွီး နစေ့ဉျဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးလိုကို ဖွဈနတောပါ။ လိငျကိစ်စကို စိတျမရောကျသေးတဲ့ လူအဖို့မှာတော့ အဲဒိအရာတှဟော သူ့ဘာသာ ကြျောဖွတျသှားကွပွီး လိငျစိတျကွှနသေူအဖို့ကတော့ မွငျမွငျကရာက အနှောငျ့အယှကျပေးနပေါတယျ။ အဲဒိ အရာတှကေို သိထားခွငျးဟာ ဦးနှောကျထဲက အဲဒိအရာတှကေို ရှငျးထုတျဖို့ အကူအညီပေးပါတယျ။
လုံလောကျတဲ့ စိတျခှနျအားရှိရငျ တောငျတဈလုံးကိုတောငျ ရှနေို့ငျပါတယျ။ လိငျစိတျကို ထိနျးတာလောကျကတော့ အပြော့ပေါ့။ လိငျစိတျအတှေးတှကေို လုံးဝ အမွဈဖွတျလို့ မရပမေယျ့ နစေ့ဉျဘဝကို အနှောကျအယှကျ မဖွဈတဲ့ အခွအေနထေိ နညျးသှားအောငျတော့ လြှော့ခပြဈနိုငျပါတယျ။ စိတျခှနျအားတိုးစတေဲ့ စာတဈခုဟာ သငျ့ရဲ့ တဈနတေ့ာကို အနှောကျအယှကျ ကငျးကငျး ကြျောဖွတျစနေိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ တကျကွှနတေဲ့ လိငျစိတျကို တခွားနရောတဈခုခုကို ပွောငျးလှဲပဈလိုကျခွငျးဟာ သငျ့စိတျကို ရှငျးလငျးသှားစရေုံသာမက အသဈတဈခုခုကိုပါ ဖနျတီးနိုငျဖို့ အထောကျအကူပေးပါတယျ။ နတေ့ဈနကေု့နျဆုံးခြိနျမှာ စိတျဆန်ဒဆိုတာ လိုအပျတာမရလို့ ရုနျးကွှလာတဲ့ ခံစားမှုတဈခုပါပဲ။ အဲဒါကို တခွား နရောကို အာရုံလှဲပေးပါ။ စာဖတျပါ။ ကဗြာရေးပါ။ ပနျးခြီဆှဲပါ။
ပနျးသပေနျးညှိုးရောဂါကို ဘယျလို ကာကှယျမလဲ
သငျ့စှမျးအငျတှကေို တခွားနရောတဈခုခုမှာ ကုနျဆုံးပဈလိုကျတာပါ။ သငျ့ကိုလဲ နရေထိုငျရ ကောငျးစပေါတယျ။ စောစောထ၊ မနကျခငျး ပွေးပါ။ တဈပါတျ သုံးကွိမျ ရကေူးဖို့ အကငျြ့လုပျထားပါ။ အလုပျမလုပျခငျ မနကျတိုငျးလဲ Gym သှားနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ကိုယျခန်ဓာကို လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျပေးခွငျးဖွငျ့ သငျ့ စိတျကိုလဲ ပိုပွီး ထိနျးခြုပျနိုငျပါတယျ။
ဘယျအရာကမှ သငျ့စိတျကို လိငျကိစ်စကနေ အာရုံလှဲမရဘူးဆိုရငျ ပွသနာ ရှိပါတယျ။ သငျက Relationship နဲ့ဆိုရငျ သငျ့ပါတနာကို သငျ လိုအပျနကွေောငျး ပွောပွပါ။ အခြိနျမှနျမှနျ လိငျဆကျဆံရငျတော့ ဒီပွသနာတှေ လြော့ပါးသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါမှ မရသေးရငျတော့ သငျ့ဆရာဝနျ၊ စိတျပညာရှငျတို့နဲ့ တိုငျပငျကွညျ့ပါ။ ဆေးဝါးနဲ့ ကုထုံးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။
GM ရဲ့ တခွား ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပကျသကျသော ဆောငျးပါးမြားကို ဖတျခငျြရငျ http://mmgentleman.com/category/health/
Previous: ရေကူးပြီးရင် မျက်လုံးနီတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ
Next: ယောက်ျားပီသချင်သူတွေအတွက် Fashion အကြံဉာဏ်လေးများ